အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: အောင်ဆန်းပင်လုံစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲ လူထုခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်
အောင်ဆန်းပင်လုံစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲ လူထုခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်
ဓါတ်ပုံများဆက်ကြည့်လိုပါက scroll box ကိုအောက်သို့ဆွဲချပြီးကြည့်ပါ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အောင်ဆန်း-ပင်လုံ စာဖတ်ခန်းဖွင့်ပွဲကို ဒီနေ့မနက်က တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်အပါအဝင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်း မှ NLD အဖွဲ့ဝင်များ ဖွင့်ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သတင်း။။NLD.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 10:17 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook